अलौकिक खेलहरू: तीन राजा बिधि
घर	हरर मनोरन्जन समाचार	अलौकिक खेलहरू: तीन राजा बिधि
by Waylon जोर्डन मार्च 19, 2020
by Waylon जोर्डन मार्च 19, 2020 16,298 हेराइहरू
IHorror मा अलौकिक गेमहरूमा नयाँ प्रविष्टिको लागि फेरि स्वागत छ। आज हामीसँग भन्दा अझ खराब चीज छ बिरालो स्क्र्याच खेल or रातो ढोका, पहेंलो ढोका। यो भनिन्छ थ्री किंग्स रीचुअल, र यो एक खेल हो जसको नियमहरू तपाईले पत्रमा पालना गर्नु पर्छ।
इमानदारीपूर्वक, म यसलाई खेलाडीमा कल गर्न घृणा गर्दछु। यो वास्तवमा एक नाम हो। यस जस्तो धेरै खेल संग जस्तै, यसको उत्पत्ति उत्तम मा नराम्रो छ। सब भन्दा चाँडो उल्लेख मैले यो पाउन सक्छु CreepyPasta वेबसाइटहरु र Reddit.
एक पक्ष नोट को रूप मा, यो उही नामको भुडू अनुष्ठान संग केहि गर्न को लागी गरीएको छैन। यो सबै एकै साथ पावरको फरक प्रकारको छ, यद्यपि केहि आपूर्ति जुन तपाइँ "खेल" भित्र प्रयोग गर्नुहुनेछ फेरि एक अधिक धार्मिक संस्कृति प्रकृतिलाई औंल्याउँछ।
आपूर्ति, नियम, र खेल को लागी चेतावनी थ्री किंग्स रीचुअल
यो सूची लामो र शामिल छ र तपाईंलाई खेल्नको लागि प्रत्येक टुक्रा चाहिन्छ। अरू केहि छोड्नुहोस्.
एक ठूलो शान्त कोठा, प्राथमिकता विन्डोज बिना। यदि तपाईंले विन्डोज भएको कोठा प्रयोग गर्नुपर्‍यो भने, तिनीहरूलाई कभर गर्नुहोस् ताकि बाहिरबाट कुनै उज्यालोले कोठामा प्रवेश गर्न सक्तैन। कोठासँग पनि ढोका हुनुपर्दछ जुन बन्द र सुरक्षित ढch्गले सुत्नेछ।
एउटा मैनबत्ती प्राथमिक रूपमा एक मजबूत स्तम्भ मोमबत्ती जो जलाउन वा चाँडै जलाउँदैन
हल्का तपाईले बत्ती बाल्नु पर्छ
पानीको एक सानो बाल्टिन र सफा मग वा कप
एक इलेक्ट्रिक प्रशंसक
दुई ठूला ऐना
एउटा अलार्म घडी
एक पूर्ण चार्ज सेल फोन
एक पार्टनर तपाईले नियमहरूको पालना गर्न विश्वास गर्नुहुन्छ र खेललाई गम्भीर रूपमा लिनुहुन्छ
एउटा सानो वस्तु जुन तपाईंको लागि भावनात्मक वा भावनात्मक मूल्य हो
खेलको लागि सेट अप गर्दै:
११ बजे, तपाइँ तपाइँको तीन राजा अनुष्ठान को लागी सेट अप शुरू गर्नु पर्छ।
तपाईको छनौट गरिएको कोठामा उत्तरको तर्फबाट एक कुर्सी। यो तपाईंको सिंहासन हो। सिंहासनको दुवै पट्टि अर्को दुइवटा कुर्सिहरू राख्नुहोस्। यी कुर्सीहरू रानी र फूलको हुन् र ती सिंहासनबाट हातको दूरीको हुनु पर्छ।
रानीको कुर्सीमा एउटा ऐनामा सुरक्षित गर्नुहोस् र एउटा फूलको, अर्को सिंहासन तिर फर्काउँदै। सिंहासनमा विराजमान, तपाईंले आफ्नो दर्शनको परिधिमा आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्न सक्षम हुनुपर्नेछ बारी र हेराई बिना।
बाल्टिन र तपाइँको छनौट कप वा मग सिंहासनको अगाडि मात्र मगिनु भन्दा टाढा राख्नुहोस्। यदि तपाईंलाई उनीहरूको आवश्यक परेमा तपाईं तिनीहरूलाई नजिक चाहानुहुन्छ, तर त्यति नजिक हुनुहुन्न किनकि तपाईं उनीहरूमा यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ।
सिंहासनको पछाडि फ्यान राख्नुहोस् र खोल्नुहोस्, तर उच्चमा होइन। मध्यम वा कम अनुष्ठानका उद्देश्यहरूको लागि पर्याप्त हुनुपर्दछ।
बत्तीहरू बन्द गर्नुहोस् र ढोका खुला छ भनेर निश्चित गरेर कोठा छोड्नुहोस् र तपाईंको शयनकक्षमा जानुहोस्।
तपाईंको सेल फोन, मैनबत्ती, र बत्तीको नजिक लाइटर राख्नुहोस् ताकि तपाईं तिनीहरूमा सजिलै पुग्न सक्नुहुनेछ तिनीहरूलाई शिकार नगरी। फोन पूर्ण चार्ज भएको छ भनेर निश्चित गर्न, म यसलाई चार्जरमा छोड्छु। तपाईंको अलार्म घडी बिहान your: your० सेट गर्नुहोस्।
तपाईंको छनौट गरिएको वस्तु लिनुहोस् र ओछ्यानमा जानुहोस्। आउनेवाला चीजको लागि तयारी गर्न यो सुत्ने समय हो।
तीन राजा अनुष्ठानको आयोजन
जब तपाईंको अलार्म घडी बिहान :3: .० मा बन्द हुन्छ, ओछ्यानबाट उठ्नुहोस्, मैनबत्ती बत्ती गर्नुहोस् र तपाईंको फोन लिनुहोस्। तपाईंको भावनात्मक वस्तु तपाईंसँग सँधै राख्नुहोस्।
तपाईँ सँग छ तीन मिनेट तपाईंको तयार कोठामा फर्कन।
जब तपाईं कोठामा प्रवेश गर्नुहुन्छ, पछाडि ढोका बन्द गर्नुहोस्। यस अनुष्ठानमा तपाईंको छनौट गरिएको पार्टनर कोठाको ठीक बाहिर पर्खनुपर्दछ र सकेसम्म शान्त हुनुपर्दछ।
तपाईंको मैनबत्तीको ज्वाला जोगाउँदै सिंहासनमा आफ्नो ठाउँ लिनुहोस्। तपाईंको शरीरले तपाईंको पछाडिको पवनबाट हावालाई रोक्दछ र यसलाई मैनबत्ती जलाउनबाट जोगाउनु पर्छ। यहाँ विचार यो छ कि, तपाइँ कोठामा आफ्नो समयको बगलमा लम्कनु पर्छ, मैनबत्तीको ज्वाला फ्यानले अन्त्य गर्नेछ र अनुष्ठान समाप्त हुन्छ।
नगर्नुहोस्, कुनै पनि बुँदामा, सायद तपाईंको छेउमा आइररहरूमा दर्पणलाई एकदमै राम्रोसँग हेर्नुहोस्! साथै, मैनबत्तीको ज्वालामा सीधा नहेर्नको लागि सक्दो गर्नुहोस्।
मानौं कि तपाईंले यसलाई तपाईंको सिंहासनमा बिहान :3::33। सम्म बनाउनुभएको छ र सबै योजना अनुसार चलेको छ, अब तपाईं ठूलो स्वरले प्रश्न सोधेर अनुष्ठानको सक्रिय भाग सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यो समय लाग्न सक्छ, तर फेरि, यो मान्दै कि तपाईंले सबै सही तरिकाले गर्नुभयो, तपाईं छिट्टै राजाहरू द्वारा सामेल हुनुहुनेछ जसले तपाईंको प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछन्।
रिपोर्ट गरीएको छ, तपाईंले वास्तवमै तिनीहरूको आवाज सुन्नुहुनेछ, तर याद गर्नुहोस्, यस कुराले कुनै चकित पार्दैन वा कसरी निराशाजनक होला, ऐनामा हेर्नु हुँदैन।
यसलाई गम्भीरतासाथ लिनु नबिर्सनुहोस्। यो मूर्ख प्रश्नहरू सोध्ने समय होइन - जुन तपाईंले पहिले सुन्नु भएन, हो ती अवस्थित छन्। तपाईसँग एक घण्टा राजाहरू छन् तपाईलाई जे सोध्न को लागी। तपाईंलाई मन नपर्ने जवाफहरूको लागि तयार हुनुहोस्, र प्रश्नहरूको उत्तरको रूपमा प्रश्नहरूको लागि तयार हुनुहोस्।
अन्तमा, तपाइँको सेसनको बखत मैनबत्ती बाहिर जान नदिनुहोस्।
बिहान :4::34 मा, ढोकाको अर्को पट्टिमा तपाईंको साथीले तपाईंलाई कल गर्नु पर्छ कि खेल समाप्त भएको छ। यदि तपाईंले प्रतिक्रिया दिनुभएन भने, तिनीहरूले तपाईंको फोन कल गर्न को लागी कोशिश गर्नु पर्छ। यदि, र मात्र यदि यी मध्ये कुनै पनि तपाईंको ध्यान लिन सफल भए, तिनीहरूले कोठामा प्रवेश गर्नुपर्नेछ र तपाईंको नाम बोलाएर तपाईंलाई विधीबाट बाहिर निकाल्ने प्रयास गर्नुहोस्, तर तिनीहरूले कुनै पनि अवस्थामा तपाईंलाई छुनु हुँदैन। र अन्तमा, यदि त्यसले काम गरेन भने, तिनीहरूले मगले तपाईंको अनुहारमा बाल्टिनबाट पानी फ्याँक्न प्रयोग गर्नुपर्छ।
यदि तपाईं आफूलाई अर्ध-सचेत राज्यमा फेला पार्नुभयो र यो फर्कने समय हो भने, तपाईं आफैले ल्याउनुभएको व्यक्तिगत आईटममा फोकस गर्नुहोस् र यसले तपाईंलाई फेरि ब्यूँझने अवस्थामा पुग्नुहोस्। यो तपाईलाई मूर्ख लाग्न सक्छ, तर यदि तपाईले रीतिरिवाज प्रति वचनबद्ध गर्नुभयो, यति टाढा, तब यो कल्पनाशक्तिको ठूलो तान छैन।
जतिसक्दो तपाईंलाई थाहा छ कि अनुष्ठानको समय सकियो, तपाईं उठ्नुपर्दछ, मैनबत्ती फुल्काउनु पर्छ र कोठा छोड्नु पर्छ बन्दको संकेत गर्न।
यदि तपाईं बिहान :3: .० उठ्नुभएन भने, जारी नगर्नुहोस्।
यदि तपाईं ढोका बन्द भएको फेला पार्न आफ्नो तयार कोठामा फर्कनुभयो भने, जारी नगर्नुहोस् र सबैलाई आफूसँगै लैजानुहुन्छ। बिहान :6:०० भन्दा पहिले नफर्काउनुहोस्।
यदि फ्यान बन्द छ वा अब कुनै तरिका मा काम गर्दैन भने, जारी नगर्नुहोस् र सबैलाई आफूसँगै लिएर घर छाड्नुहोस्। बिहान :6:०० भन्दा पहिले नफर्काउनुहोस्।
विधी पूरा हुन अघि तपाईंको मैनबत्ती बाहिर जान नदिनुहोस्।
फेरि, माथि भनिएझैं कुनै पनि बिन्दुमा सीधा दुई ऐनामा नहेर्नुहोस्। यो भनिन्छ कि तपाईले त्यहाँ जे हेर्नुहुन्छ त्यसले तपाईको चेतना भित्र तान्न सक्छ र तपाईले राजाहरूको पासोमा पर्न सक्नुहुन्छ।
बिहान :4::34 भन्दा पहिले तपाईंको सिंहासन छोड्नुहोस्।
यो रीति रिवाज अभिनय नगरी वा अनादर नगर्नुहोस्। यो तपाईं वा तपाईंको अनुष्ठान पार्टनरको लागि राम्रोसँग अन्त्य हुँदैन।
हामीले अहिले सम्म यस श्रृंखलामा राखेका सबै खेलहरू मध्ये यो जोखिमपूर्ण छ किनकि यसले वास्तवमा विधीवादी तत्त्वहरू र सोल्ट स्पिरिट समावेश गर्दछ। ती विशेष तत्वहरू पनी, तपाईं पनि एक बत्ती बालेको मैनबत्तीमा एक घण्टाको लागि समात्नुहुन्छ त्यसैले त्यहाँ जलेको खतरा पनि छ।
निश्चित गर्नुहोस् कि यो केहि हो जुन तपाईं पक्रनु अघि तपाईंले साच्चै गर्न चाहानुहुन्छ थ्री किंग्स रीचुअल.